Ama-SmartDocs: Phatha iMibhalo YeMicrosoft Word | Martech Zone
Amaqembu amaningi we-B2B Marketing azithola ebhala iziphakamiso (RFPs) nezinto zokumaketha ku Microsoft Word kaninginingi. Lapho ibhizinisi lakho seliqala ukukhula, uthola ukuthi unemibhalo yonke indawo. Sisebenzisa i-Google Amadokhumenti ukuthola imibhalo yamakhasimende nokusebenzisana kwethu. Sisebenzisa I-Tinderbox kokugcina kwethu kwesiphakamiso.
Njengoba iningi lezinkampani zamabhizinisi ziyaqhubeka nokusebenzisa Microsoft Word ukubhala imibhalo yabo… ayikho indlela elula yokusebenzisa leyo mibhalo. Isofthiwe ye-ThirtySix yinkampani yesifunda esanda kukhombisa uhlelo lwayo lokugcina olusekelwe kubuchwepheshe beMicrosoft ku I-Verge - ingqungquthela yanyanga zonke ekhombisa ukuqala okukhulu esifundeni.
Kusetshenziswa izinsizakalo zeMicrosoft Sharepoint, iThirtySix Software yathuthukisa ama-SmartDocs ukuphendula inkinga ethize - kepha enkulu kakhulu. Izinkampani ezinkulu ezinamathani amadokhumenti zazingenayo indlela yokuhlela, ukuthola, nokuhlanganisa ngokuzenzakalela imibhalo yokusetshenziswa okuhlukile. Manje benza ngama-SmartDocs. I-SmartDocs yisixazululo sokuphathwa kokuqukethwe nokusetshenziswa kokuqukethwe ku Microsoft Word.
Amaphuzu avelele wezici ze-SmartDocs:
Sebenzisa okuqukethwe okubhaliwe futhi okuvunyiwe ukudala ngokushesha okusha Microsoft Word imibhalo.
Phinda usebenzise umbhalo, amatafula, imidwebo, namashadi kalula Microsoft Word imibhalo.
Sebenzisa umbhalo onemibandela ukukhiqiza ukuhlukahluka okuningi kokukhishwa kudokhumenti eyodwa ye-Microsoft Word.
Susa okuqukethwe okungahambelani nokungaphandle kwesikhathi ngezaziso zenguquko ezisebenzayo kanye nezibuyekezo ezizenzakalelayo.
Isebenza ngefa Microsoft Word imibhalo. Akukho ukuguqulwa kwedokhumenti okudingekayo.
Ihlangana nanoma yiluphi uhlelo lokuphathwa kwemibhalo.
Qhubeka nokugcina amadokhumenti akho endaweni efanayo oyisebenzisa namuhla.
Amanye amalungu ezilaleli abuze ngezinhlelo zenkampani zokusebenza nokuhlanganiswa kwamanye amapulatifomu ehhovisi. I-ThirtySix Software iphendule ngokuthi ngeke zibe khona izinhlelo ezinjalo - uhlelo lubhalwe ku-C #, lwakhiwe nge-Sharepoint, futhi lusebenza ngqo ne-Microsoft Word. Ngivumelana neThirtySix ukuthi leli isu elihle kakhulu - imakethe yeMicrosoft inkulu kakhulu futhi izindleko nokulahleka okuhambisana nokudaka umbono wabo kuzoba kukhulu kakhulu.
Vakashela Isofthiwe ye-ThirtySix ukuthola eminye imininingwane noma ukukhonjiswa kwesoftware yabo.
Tags: b2b ikhasimende intelligenceb2b ukwaneliseka kwamakhasimendeimibiko yefaneliUJesse Hlalainani lempiloi-ltvubuwula